I-CAMINANte retreat - Buka iindwendwe NGESIDLO SAKUSASA - I-Airbnb
I-CAMINANte retreat - Buka iindwendwe NGESIDLO SAKUSASA
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguGerardo
"I-El Descanso" yindawo eyahlukileyo, engqongwe yindalo, apho sinika iindwendwe zethu indawo yokuhlala enesidlo sakusasa equkiweyo, apho sibeke phambili khona Ukubuka Iindwendwe ngobunewunewu, ngaphandle kokushiya Ubutofotofo obufana nekhaya lakho, kodwa sifakwe kwindawo esezilalini. Sine-Wifi, indawo yokupaka, izinto zokugrilla, ipaki, igumbi lokutyela, kwaye, ekubeni sisuka kwinqaba enesibane phezulu, sikwiiblokho ezisuka elwandle, kunye noMlambo iQuequen, ezifanele zonke iintlobo zemidlalo yamanzi.
Yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna ukudibana nendalo, kwanabo bathanda ukusefa, ukuloba, ukuhamba ngephenyane neminye imidlalo yamanzi; kokubini elwandle nakuMlambo iQuequen. Abo bakuthandayo ukuhambahamba emaphandleni okanye ukuhamba ngebhayisekile.
Ukususela kwiifestile zokuhlala kwethu ungabona ubuninzi beendawo ezisemaphandleni kwaye unokonwabela ukutshona kwelanga ukuya kutsho ngokupheleleyo.
Ukuba uza kuhlala nam, ndiza kukuvuyela xa ufika ndize ndifumaneke kuyo nantoni na ngoxa uphumle. Ngapha koko, kwimeko engaphezu kwenye, ndiye ndakubulisa kwisikhululo sebhasi ukuze ndilungiselele ukufika kwakho. Injongo yam kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko kunokwenzeka, ngaphakathi nangaphandle kwezinye.
Ukuba uza kuhlala nam, ndiza kukuvuyela xa ufika ndize ndifumaneke kuyo nantoni na ngoxa uphumle. Ngapha koko, kwimeko engaphezu kwenye, ndiye ndakubulisa kwisikhululo sebhasi ukuz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quequén